केहि दिन अगाडी सर्बाधिक चर्चाको बिषय बनेको लोकप्रिय लोक गायीका बिष्णु माझीको बारेमा विभिन्न संचारमाध्यममा थरी थरिका खबर छापिए । कतिपयले बिष्णु माझीलाई श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीले बन्धक बनाएको अभिव्यक्ति दिए भने कतिपयले बिष्णु आफ्नै इच्छा, चाहानाका कारण गुमनाम जीवन बाँचिरहेकी हुन् भनि अभिव्यक्ति दिए । बिष्णु माझीको बारेमा यी समाचारहरु भाइरल नै भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले समेत चासो देखाएर बिष्णु माझीको खोजतलास गर्यो । त्यसपछि सुन्दरमणि विष्णुलाई लिएर जिप्रका स्याङ्गजा पुगेका थिए । जिप्रकामा उपस्थित हुँदा बिष्णु कमै मात्र बोलेको र आफ्नै चहानाले गुमनाम जीवन बाँचिरहेको बताएपछि उनको बारेमा अनुसन्धान स्थगित गरियो । यसै बिषयमा नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ त्रि.वि. समन्वय समितिका अध्यक्ष अशोक राईले एउटा आलेख लेखेका छन् । समसामयीक बिषयमा कलम चलाउने राई समाजशास्त्र तथा कानुनका बिद्यार्थी समेत हुन् । उनको आलेखलाई हामीले जस्ताको त्यस्तै तल प्रस्तुत गरेका छौं ।
लेखक : अशोक राई
विष्णु माझी र कुलेन्द्र विकको स्वरमा ‘सालको पातको टपरी हुने हे बरै न हुने सल्लैको तिम्रो माया कति छ कति हे बरै नआउ पछि हल्लैको’ बोलको लोक दोहाेरी गीत चार महिनाको अवधिमा (पुस ३० गतेसम्ममा) २,१७,१२,८४५ ले हेरिसकेको पहिलो नम्बर लोकदोहरी गीत बनेको छ ।
तर यति चर्चा परिचर्चा गीत गाएकी स्वरकी धनी विष्णु माझी कस्ती छन् ? बाहिर दर्शकमाझ किन आउदिनन् ? किन भूमिगत बसेकी हुन् ? किन कुनै संञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता नदिएकी हुन् ? जहिले पनि १०, १५ वर्ष अगाडिकै एउटै फोटो मात्र किन भिडियोमा ? यतिखेर अनेक प्रश्नहरु माझीप्रति गरिरहेका छन् जो देश तथा विदेशमा बस्नुहुने नेपाली फ्यानहरुले ।
कतै माझी हिंसाको शिकार त भएकी छैनन् ? पतिसँग दबिएर बस्नु त परेको छैन ? प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ? माझीको व्यतिगत जीवनको बारेमा यसरी बोल्न हुने र बोल्न नहुनेबीच पनि तर्कवितर्कको विषय सामाजिक सञ्जालमा पनि बनेको छ ।
समाजशास्त्रीहरु भन्छन्– कुनै पनि घटना घट्नुको पछाडि त्यसका कारण हुन्छन् । घटना घट्नुका कारणहरु पत्ता लगाई त्यसको समस्या निराकरण गर्नु सबै भन्दा उत्तम मानिन्छ ।
म समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तरोपाधि र कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले माझी गुमनाम भएको समाचारको हेडलाइनले आफैले आफैलाई प्रश्न गरिरह्यो । राष्ट्रको गहना मानिएका कलाकार माझी कसरी गुमनाम भएर बस्न सक्छिन् ? माझीको यो रहर हो वा बाध्यता के हो ? अन्तरजातीय विवाह गरेकी माझीलाई कतै अधिकारी परिवारले विभेद त गरेकी छैनन् ? यस्ता अनेकौ प्रश्नहरुले मलाई सताईरह्यो । आखिर को हुन् त विष्णु माझी ? किन चासो राखेको छै्नन् महिला क्षेत्रमा काम गर्ने महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकार, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले ? ३ करोड नेपालीहरुले माझी गुमनामको पछाडि आफ्नै पति अधिकारीलाई दोष वा शङ्का लगाई राख्दा पनि अधिकारी र माझी दुबैले कुनै पत्रकार सम्मेलन गरी स्पष्ट र वास्तविक जानकारी दिन किन चाहँदैनन् ? आखिर किन ? यी कारणहरुलाई समाजशास्त्रीय, जेन्डर र जातीय विभेद आदिको दृष्टिकोणबाट के कसरी विष्लेषण गर्न सकिन्छ त ?
अधिकारीले आफ्नो श्रीमतीलाई बन्देज गरी कमाईको पैसा मोज गर्न मात्र खोजेका हुन् भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन ।
कान्तिपुरलगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमकाे समाचारका आधारमा जिल्ला प्रहरी स्याङ्जामा विष्णुको परिवार, प्रमुख्र जिल्ला अधिकृत कोशहरि निरौला, एसपी राजकुमार लम्साल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्मा र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख रोशन केसीसहितको छलफलमा माझी निकै कम बोलेकी र उनलाई सोधिएको प्रश्न पति सुन्दरमणि अधिकारीले दिनु र आफ्नो श्रीमती विष्णु माझी अनपढ, पढेलेखेको छैन उनलाई त्यति बोल्न आउदैन भनेर माझीको क्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् ।
त्यति मात्र नभएर आफ्नो श्रीमतीको बोल्न पाउने मानवअधिकार माथि बन्देज गरिएको छ ? आखिर किन सुन्दरमणिले यसो गरेका हुन् त ? सोचनीय कुरा त यहाँ छ । कालीगण्डकी नदीको किनारामा रहेको झुपडीबाट कक्षा ९ पढ्दापढ्दै काठमाडौं आएकी माझी साच्चै अनपढ र बोल्न नजान्ने नै हुन् त ?
एसपी लम्सालले सुन्दरमणिलाई फोन गरेर विष्णुलाई स्याङ्जा जिप्रकामा ल्याउन र यदि नल्याए प्रहरी परिचालन गरेर भए पनि ल्याउछु भनेपछि मात्र सुन्दरमणिले विष्णुलाई स्याङ्जा लिएर आएको बताइन्छ । छलफलको क्रममा अधिकारीले अन्तरजातीय विवाह भएकोले दुवै जनालाई छुटाउन खोजिएकाले गुमनाम जस्तै हुनु परेको बताए । अधिकारी सर अशिक्षित माझीको बाबााआमाले कसरी विवाह गरेको छोरीलाई छुटाउन सक्छ होला र ? छोरीको विवाह भएको ११ वर्षपछि, बल्ल बाबा र छोरी भेट भएको छ ? छोरी सञ्चो, बिसञ्चो थाहा नभएको तपाईको सासुससुराले छोरीको दाम्पत्य जीवन छुटाउने प्रयास कसरी गर्न सक्छ होला र ? अहँ मैले विश्वास नै गर्न सकिनँ । अझ भन्ने नै हो आदिवासीको संस्कार अनुसार आफ्नो छोरीले मन पराएको ज्वाईँ (श्रीमान्) जुनसुकै जातसँग गए पनि प्रायः छुटाउने चलन छैन । बरु छुटाउने खोजे होलान् तपाईको अधिकारी परिवारले ? बाहुनको परिवारले माझीको बुहारी स्वीकार गर्न गा¥हो भयो होला, होइन र ?
छलफलको क्रममा अधिकारीले देश–विदेशको साङ्गीतिक कार्यक्रममा बाहिरी दुनियासँग फेस गर्न नसक्ने गायिका विष्णु एक्लैलाई मात्र बोलाउने र आफूलाई चाहिँ नबोलाएको कारणले गर्दा नै विष्णुको विदेशको कार्यक्रम जान नसकेको भनाई अधिकारीको रहेको छ ? साँच्चै अधिकारीले माझीलाई कस्तो सामाजिकीकरण सिकाउँदैछन् ? समाजसँग बोल्न सक्ने शिक्षित, सक्षम श्रीमती बनाउँदैछ कि बन्धक कोठाभित्र गोपी कृष्ण काउ भन्न सिकाउँदैछ ? सवाल अनि प्रश्न यहाँ छ । के अब आयोजकहरुले अधिकारीलाई बोलाएमात्रै माझी विदेशको कार्यक्रममा जान सक्ने हुन् त ? विदेशको साङ्गीतिक कार्यक्रममा नेपालबाट माझी मात्र एक्लै जाने कार्यक्रम हुन्छ त ? कार्यक्रममा साङ्गीतिक टोली हुन्न र ? नेपालभित्रको कार्यक्रममा पनि आयोजकले अधिकारलाई नबोलाएर नै स्टेज कार्यक्रममा माझी सहभागी नभएको हो त ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु उब्जाउन, मलाई बाध्य बनाएको छ ।
आखिर अरु महिलाको तुलनामा के कुरामा कमजोर छिन् र ? विष्णु माझी राष्ट्रको गहना हुन्, राष्ट्रको सम्पत्ती हो । श्रीमानको तुलनामा हेर्ने नै हो भने विष्णु माझीले एउटा गीत रेकर्डिङ गराए बापत पारिश्रमिक ५० हजार रुपैयाँ कमाउछिन् । यस्तै महिनामा २, ३ वटामात्र गीत गाउने हो भने १ लाखदेखि १५० लाखसम्म मासिक आय देखिन्छ । अधिकारीले आफ्नो श्रीमतीलाई बन्देज गरी कमाईको पैसा मोज गर्न मात्र खोजेका हुन् भने यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । छुट्टै एउटा लक्ष्य भएको कारणले सार्वजनिक हुन नखोज्नु राम्रो पक्ष होला, तर लक्ष्य प्राप्तिको लागि कसैको जिन्दगीमाथि बन्धक वा जघन्य काम गरिरहेको बुझ्न नसक्नु त्यो अपराध हो ।
याद रहोस्, हिन्दू संस्कारमा हुर्केका सुन्दरमणि अधिकारीले आफ्नो पत्नी त्यसमा पनि जनजातिका छोरी माझीले मुस्लिम संस्कार जत्तिकै कालो रङ्गको ओभर कोट, पुरै टाउको छोप्ने गरी बेरिएको कालो पछ्यौरा साथै कालो मास्क सार्वजनिक ठाउँमा लगाउनु माझीको बाध्यता वा सुन्दरमणिको चाहना के हो ? याे ३ करोड नेपालीको प्रश्न । के बिष्नु माझीको ठाउँमा बिष्णु अधिकारी र सुन्दरमणि अधिकारीको ठाउँमा सुन्दरमणि माझी भइदिएकाे भए के उनीहरू बिचको सम्बन्ध पनि यस्तै लोक गायिका बिष्णु माझीको जस्तै बिष्णु अधिकारी पनि गुमनाम नै बस्नु पर्थौ होला र ?
नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ त्रि.वि. समन्वय समिती, किर्तिपुर